[solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem]
1 [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem] on 28th May 2010, 5:09 pm
Software တွေကို Install လုပ်တဲ့အခါမှာ "The system administrator has set policies to prevent this installation." ဆိုပြီး Dialogue Box ကျကျလာလို ့ပါ။
လောလေဆယ်တော့ Driver တွေကိုတင်တဲ့အခါနဲ ့Need for speed တင်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်နေတာပါ။
Windows7တင်ထားပါတယ်။
2 Re: [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem] on 29th May 2010, 8:58 am
ကိုထက်နိုင် က windows7ကို ဘာဗားရှင်းတင်ထားတာ လဲ နောက်ပြီး စက် က ဘာအမျိုးအစား လည် သိလို့ ရမလာ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ၀ိုင်းစဉ်းစားပေးလို့ ရနိုင်မှာပါ တစ်ချက်လောက် အဲ့ဒါလေ ပြန် တင်ပေးပါ ခင်ဗျာ
3 Re: [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem] on 29th May 2010, 1:26 pm
32 bit ပါ။ License Version မဟုတ်ပါဘူး။ စက်ကတော့ Dell Inspiron 1464 ပါ။
ပြီးတော့ DVD-ROM ကနေ Install လုပ်လို ့ပဲ မရတာပါ။ Pen Drive ကနေတော့ရတယ်။
သုံးတာကတော့ Administrator အကောင့်နဲ ့ပါ။ Windows ကိုပြန်တင်ရင်တော့ ရဖို ့များပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြန်မတင်ချင်လို ့ပါ။
4 Re: [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem] on 7th June 2010, 4:37 pm
အဲ...သားကို ကူညီကြဦးလေ။ Windows ပြန်မတင်ချင်လို ့ပါ။
5 Re: [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem] on 7th June 2010, 7:49 pm
ကိုထက်ရေ gpedit.msc ကိုမွှေစေချင်ပါတယ်...
6 Re: [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem] on 7th June 2010, 8:00 pm
7 Re: [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem] on 8th June 2010, 4:34 pm
C0D3R wrote: 1. Enter the control panel once again and open Administrative Tools.
ပြောပြပေးတာကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မရသေးဘူးခင်ဗျ။
8 Re: [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem] on 8th June 2010, 6:20 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 96
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 251
9 Re: [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem] on 27th June 2010, 10:31 am
တည်နေရာ : Thailand
Windows7မှာတော့ မကြုံဘူးလို့ မစမ်းဖြစ်သေးပါဘူး။ Windows XP အတွက် ရှာဖွေထားတာလေးတွေကိုတော့ ပြောပြလိုပါတယ်ဗျ။
Windows XP အတွင်းသို့ Kasper's Anti-Virus Install ပြုလုပ်ခြင်း၊ Updates ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် အခြားသော Program များကို install ပြုလုပ်ရန် ကြိုးစားစဉ် Windows က လက်မခံပဲ ယင်းကဲ့သို့ Error message box တစ်ခု တက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Windows XP group policy ရဲ့ system တွင် ပိတ်ထားပါက ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ viruses, spy wares များအား ရှင်းလင်းရန် ကြိုးစားစဉ် ယင်းကဲ့သို့ အယောင်ဆောင် alert များလည်း ပေးတတ်နိုင်လေသည်။ မိမိစက်တွင် ထိုကဲ့သို့ အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ကုစားပေးနိုင်ပါသည်။
(1) Start Menu မှ Run ကို ရွေးချယ် Click နှိပ်လိုက်ပါ။
(2) Run Box ထဲတွင် gpedit.msc ဟု ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
(3) Group Policy dialog box ပေါ်လာပါမည်။ Group Policy ရဲ့ Local Computer Policy ရဲ့ အောက်ဖက် ရှိ Computer Configuration အတွင်းမှ Administrative Templates ကို ရွေးချယ်ပါ။
(4) ထို့နောက် ၎င်း Administrative Templates ရဲ့ အောက်ဖက်ရှိ Windows Components အတွင်းရှိ Windows Installer ပေါ်တွင် အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ် click နှိပ်ပေးပါ။
(5) ထိုအခါ Group Policy ရဲ့ ညာဖက်ခြမ်းရှိ Setting အကွက်ထဲတွင် Disable Windows Installer ပေါ်တွင် Double Click နှိပ်ပေးပြီး Not Configured ကို select လုပ်ပေးပြီး OK နှင့် ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Computer ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားပြီဖြစ်လို့ ဘယ်အစား အသောက်ကိုမဆို မငြင်းတော့ဘူးပေါ့။
10 Re: [solved]Install လုပ်လို့မရလို့ပါ။ [Problem]